Ịtụte Family, ịtụte Church, akpọte Nation, Jehova # 322
Jesus: The Onyeikpe nke Church Nke anabata Mọ nke Jezebel, Part 3
A okwuchukwu bụ "okwu dị mkpirikpi na a okpukpe ma ọ bụ omume isiokwu; a na-emekarị adịghị ozizi; a okwu ihu ọha ma ọ bụ okwu na-ekwu na ọ bụ nke a na Akwụkwọ Nsọ isiokwu."
Anyị usoro nke homilies site n'akwụkwọ Ndị Efesọs, anyị lekwasịrị anya ka ị maliteghachi Christian ezinụlọ. Ugbu a, m na-ekere òkè a n'amaokwu na-amaokwu usoro nke obere ozi si n'akwụkwọ Mkpughe, kpọmkwem ezubere iche na ị maliteghachi chọọchị. Ọ bụrụ na mba anyị bụ na-edemede, ezinụlọ na chọọchị ga-amaliteghachi mbụ.
TEXT: Mkpughe 2: 18-21:
18 si mọ-ozi nke ụka na Taịataịra dee; Ihe ndị a ka Ọkpara Chineke, onye nwere anya ya dị ka rue a ire ọku, ya na ụkwụ ya dị ka ezi ọla;
19 Amaara m na-gi ọrụ, na ebere, na ije ozi, na okwukwe, na-gi ndidi, na-gi ọrụ; na ndị ikpeazụ na-ọzọ karịa nke mbụ.
20 N'agbanyeghị na m nwere ihe ole na ole imegide gi, n'ihi na i sufferest na nwaanyị Jezebel, nke nākpọ onwe-ya onye-amuma, na-akụziri na ịrata-ejere m ozi ịkwa iko, na-eri ihe chụọ àjà we arụsị.
21 M wee nye ya ohere ichegharị ya iko; na ọ chegharịrị.
A.T. Pierson si, "The elu ule nke ọrụ bụ nke a: N'ihi na onye m na-eme nke a? Ukwuu nke na anyị na-akpọ ọrụ Christ bụghị ndị dị otú ahụ na ihe niile ... Ọ bụrụ na anyị na-eme nke a n'ihi na Kraịst, anyị agaghị na-elekọta mmadụ ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ọbụna ude . "
Leonard Ravenhill si, "Ọ bụ m ukwu ike na kasị dị ebube hour nke na chọọchị ma na-amụ. All ndị dike nke okwukwe na-adịghị ma e depụtara. All ndị isi nke chọọchị ahụ, 'mma dị ka ọnwa, doro anya dị ka anyanwụ, na egwu dị ka ndị agha na-ọkọlọtọ, 'ma e dere. The kasị ukwuu ịkpa nke okwukwe ma na-eme. "
Na ha n'akwụkwọ, The Iri Kasịnụ revivals Ever, Elmer Obodo na Douglas Porter ike na anyị: ""
Jesus nwere ụfọdụ elu okwu otuto ndị chọọchị na Tayataịra. Ọ na-ekwu, "m mara gi ọrụ, na ebere, na ije ozi, na okwukwe, na-gi ndidi." Up ruo l ugbu a, na usoro isiokwu a nke akwụkwọ ozi, Jizọs jara mma na-adịghị chọọchị nanị na-adabere na ọrụ ya. Ọ dị ịrịba ama na a comment na-aga ndị kasị nta na chọọchị dị na otu n'ime ndị kasị nta na obodo, na-agwa anyị na a na chọọchị adịghị ga-enwe nnukwu iji mee ka onye mmetụta n'ihi na Jehova. Ọ bụghị nanị nke ukwu nke ọrụ na Jizọs na-achọ ma àgwà nke ọrụ, na o yiri ka ndị chọọchị na Tayataịra nwere ma na spades.
Jesus otoro ha maka ọrụ ha na ha na-ejere Ya, ka onye ọ bụla ọzọ, na ụwa. Nke a na-ada ka ụdị ụka na nwere bụla ozi na-enweghị atụ - ofe kichin, daycare, ụlọ ọgwụ nleta, afterschool elekọta, nri pantiri, na ndị ọzọ. Ha rụsiri ọrụ ike n'ihi na Jehova. Ma, ndị ọzọ ihe, ha nile-arụ ọrụ ọma e ekechi Kraịst mmụọ nke ọrụ ebere, okwukwe, na ndidi. Ha nwere ịhụnanya maka Chineke na maka mmadụ ibe ha. Ha nwere okwukwe na Chineke ga-eme ka ezi ihe si na nke mgbalị ha. Na ha nwere ndidi dị ka ha chere na Jehova na dị ka ha si mesoo na obi nkoropụ, mmejọ, na foibles nke ndị ha na obodo. Chọọchị taa pụrụ ịmụta site na ihe nlereanya ha. Anyị na-asọpụrụ Christ bụghị nnọọ site na ọrụ anyị, kama site n'ime ọrụ anyị na mmụọ nke ịhụnanya, okwukwe, na ndidi.
N'ikpeazụ, anyị na-achọpụta onye ndị ọzọ n'ókè nke otuto na Jehova nwere maka ndị chọọchị na Tayataịra. Ọ bụghị nanị na ha na-eme ezi ọrụ, ma ọrụ ha na-aba ụba ezu. Jizọs na-ekwu Ọ hụwo otú ndị chọọchị ikpeazụ ọrụ ukwuu karịa ha na mbụ ọrụ. Nke a na chọọchị e-eto eto ike gwụrụ nke ọma na-eme ma ọ bụ na-"ọrụ ebere ike ọgwụgwụ" dị ka anyị na-akpọ ya taa. Ha bụ ndị na ọkụ ha na-ejere Jehova, na-na hotter na hotter na oge. Ọtụtụ chọọchị, na ndị Kraịst n'otu n'otu, mkpa na-azụ a ndụ nke ukwuu àgwà ọrụ n'ihi na Jehova. Anyị kwesịrị ịdị na-achọ ụzọ na-eje ozi kama na-agbalị ime ka obere ka o kwere omume. Ka Chineke mee ka obi anyị mụnyere Ya na Ya ụwa.
Àgwà anyị kwesịrị ịdị na-ahụ e kwupụtara na uri a site Theodore Chambers:
Abụ m ohu gị, o Jehova bụ Chineke m
ga-ruo ụbọchị m ịnwụ -
N'agbanyeghị ihe mgbu m na-ata ahụhụ,
N'agbanyeghị na anya mmiri na m na-eti
Na ebe ọ maara na I nwere m azụ,
mgbe na-ejide m obi gị aka,
M na-ekwe nkwa ime ihe niile i kwuru.
M ga-isi gị ukwu abụọ e nyere n'iwu.
Ugbu a, m maara na m na-enweghị Jesus;
M na na Moses, David, ma ọ bụ Paul.
Ma, m na-ekwe nkwa na m ga-eme ike m nile
inye Ị m niile na ihe niile.
M ga-agwa ụwa dum banyere Ị,
Nwa gị na Mmụọ Nsọ kwa.
M ga-egosi onye ọ bụla na otú egwu Ị bụ
site ụba nke m na-ejere Ị.
Ka anyị kpee ekpere.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-amaghị nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dị ka Onye Nzọpụta, biko na-uche na Bible na-ekwu, "Kwere n'Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na ga-azoputa gi." Akpa, na-aghọta, na ị bụ onye mmehie nakwa na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ na Hell. Ma Chineke zitere Jizọs Christ ịnwụ n'elu obe n'ihi mmehie gị. E liri ya, na Ọ si n'ọnwụ bilie site na ike nke Chineke mere na i nwere ike a ga-azoputa si ọnwụ na Hell. Ndị Rom 10:13 kwuru, sị, "N'ihi na onye ọ bula nke ga-akpoku aha Onyenwe anyị ga-azoputa."
Ọ bụrụ na i kwere na Jizọs Kraịst nwụrụ n'elu obe n'ihi mmehie gị, e liri ya, na si n'ọnwụ bilie, ma na ị chọrọ ka obi Ya maka nzọpụta gị taa, biko ekpe ekpere na m mfe ekpere: Nna Nsọ Chineke, m na-aghọta na m Abụ m onye mmehie nakwa na m mere ụfọdụ ihe ọjọọ na ndụ m. N'ihi na Jizọs Kraịst, n'ihi biko gbaghara m nke m na mmehie m. M ugbu a kwere na niile nke obi m na Jizọs Kraịst nwụrụ n'ihi m, e lie ya, bilie ọzọ. Onyenwe anyị Jizọs, biko bata nime obi m na-azọpụta mkpụrụ obi m na-agbanwe ndụ m taa. Amen.
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ tụkwasịrị Jizọs Kraịst dịka Onyenzọpụta gị, na ị na-ekpe ekpere ka ekpere pụtara na ya na obi gị, m na-ekwusa gị na-adabere n'Okwu Chineke, ị na-now zọpụta site Hel na ị na-na ụzọ gị Heaven. Mmadụ Bịa na ezinụlọ nke Chineke! Ekele na-atụkwasị obi na Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe gị na Onye Nzọpụta. I mere ka ihe kacha mkpa ná ndụ. Maka ozi ọzọ na-enyere gị na-eto eto na ọhụrụ gị okwukwe na Kraịst, na-aga Gospel Ìhè Society.com ma na-agụ "Gịnị Ka Ime Mgbe Ị Tinye Site n'Ọnụ Ụzọ". Jizọs Kraịst kwuru na Jọn 10: 9, "Abụ m ọnụ ụzọ, site na m ma ọ bụrụ na onye ọ bụla abata, ọ ga-azọpụta, ọ ga-aga na ya, ma na-achọta ebe ịta nri."
Chineke hụrụ gị n'anya. Anyị hụrụ gị n'anya. Nwere ike na Chineke gọzie gị.